· Dzama Cocktail Café Ivandry : Menu spécial miaraka amin’ny fanomezana ho an’ireo reny rehetra. Amin’ny atoandro irery ihany. Tsara raha mamandrika toerana amin’ny 22 434 10
· Hotels Tamboho Tana Water Front Ambodivona sy Ambatonakanga : Brunch special fete des meres manomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 3 ora tolakandro. Paf: 50.000Ar
· Les saveurs du Louvre Antaninarenina : « Buffet rose et blanc », live spécial « Mama » burger + cocktail offert aux mamans + atelier du chef
· « Au buffet du Saka » Sakamanga Antsahavola : Buffet ouvert de 12h à 14h30 – 42.000Ar par pesonne Cont : 22 358 09
Promotion chez Cybèle Beauty Ampitatafika du 24 au 26 mai:
· Offre 1 : Shampoing, brushing+ sourcils + Liner + lèvres = 19.000Ar
· Offre 2 : Massage facial + teint + fard + Liner + lèvres = 19.000Ar
· Offre exceptionnel ny sabotsy 25 mey manomboka amin’ny 6 ka hatramin’ny 8 ora maraina : Cross Fitness miaraka amina « coach » matihanina. Maimaim-poana ny fizahana ny hodi-tava ho an’izay rehetra tonga. Cont: 033 91 711 22
Alahady 26 mai
Arena Ivandry: Lalatiana hizara fitia ho an’i Neny manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Paf: 40.000Ar Reservation: 60.000Ar
· Tahala Rarihasina 24 sy 25 mey: Varotra kojakoja isan-karazany. Fampirantiana sy varotra fahatsiarovana ho an’i Neny atolotr’i Ny Eja sy Suzy Rahanta, poeta sy mpanao hosodoko.
· Zaridaina Antaninarenina hatramin’ny 25 mey: “Kanton’i Gasikara” varotra fampirantiana vokatra vita Malagasy ranoray.